Isi Ihe Ekwupụtara
Egweri & ịcha Wheels
Stọ Ngwá Ọrụ
A kpọrọ Yang Quanlu ka ọ gaa nnọkọ nke "echiche ọhụụ ọhụrụ + ihe ọgụgụ isi iji kwalite mmepe mmepe nke ụlọ ọrụ" wee kwuo okwu
Na Jenụwarị 3, 2020, Yang Quanlu, onye isi oche nke quangong Tools Co., Ltd., ka a kpọrọ isonye na nnọkọ nke "echiche ọhụụ ọhụrụ + akụrụngwa ọgụgụ isi iji kwalite nkwalite mmepe nke ụlọ ọrụ" emere na Beijing Ndị mmadụ kwa ụbọchị. Alojado site Tao liming, nchịkọta akụkọ na o ...
2020, ka anyị gaa n’ihu ịchụso nrọ anyị, agaghị ahapụ oge anyị!
Na-adịbeghị anya, akwụkwọ coronavirus ka oyi baa emetụta obi nke mba ahụ dum. N'oge dị egwu nke ịlụ ọgụ megide ọrịa ahụ, ọrụ ahụ dum zara oku nke gọọmentị, na n'okpuru nduzi nke ndị isi ụlọ ọrụ ahụ, gbasiri mbọ ike wee pụọ ...
Akwụkwọ ozi otuto nye Guo ogologo, Ministri nchekwa na gburugburu ebe obibi
site ha na 20-04-07
N'ime oge dị oke egwu nke oyi baa nke ụdị coronavirus mere, ụlọ ọrụ anyị ji ịnụ ọkụ n'obi zaa oku gọọmentị, gbochie oke mgbasa nke ọrịa ahụ, wee hụ na mgbochi ọrịa na mgbochi ọrịa na-akpata oke mmeri. Ọrịa situatio ...
Dị n'otu dị ka onye na-alụ ọgụ "ntiwapụ"
Site na akwukwo ohuru ohuru coronavirus ka oria oria ojoo na ichikota oru batara n'ime oge di egwu, onye oru nile na etinye ezigbo uche na mgbochi oria oria na oru oru. Yang Zhanfei, onye isi njikwa nke ụlọ ọrụ ahụ, haziri ọtụtụ nzukọ ịntanetị iji dozie nkenye nke t ...
Daalụ nzukọ emere nke ọma
Na Jenụwarị 18, ọkụ ji ọkụ chọọ ụlọ ọgbakọ Nanhe Hotel mma, ihe karịrị ndị ọrụ 100, gụnyere ndị isi niile, ụfọdụ ndị na-eweta ngwaahịa na ụdị ndị magburu onwe ha gbakọtara n'otu ụlọ nzukọ na-enwe ọ jụ. Emere ịja mma afọ 2019 na mgbede ndị na-enwe ekele maka ndị ọrụ ebe a. Na 17: 00pm, pa ...
Quangong Tools Co., Ltd. keere na mbubata mbubata na mbupụ China
Akụkụ nke mbụ nke China Bubata na Mbupụ Mbupụ (Canton Fair) na 2019 bịara na oge. Puku kwuru puku ndị ọrụ mmepụta ihe na ama ama ama na ngwa akụrụngwa, igwe, akụkụ ụgbọ ala, ihe ụlọ na ụlọ ọrụ ọkụ gbakọtara ebe a. Quangong Tools Co., Ltd. emi odude ke ebe C nke ngwaike ...
Quangong Tools Co., Ltd. sonyere na Shanghai Cologne International Hardware Exhibition
Iji na-akwalite ngwangwa mmepe nke enterprise azụmahịa, ụlọ ọrụ abuana ke 2019 Shanghai Cologne International Hardware Ngosi si October 10 na October 12, na ihe karịrị 30 ọhụrụ na ndị agadi ahịa na a ntụgharị nke ihe karịrị 5 nde yuan. Site na October 10 ruo October 1 ...
Hebei quangong ibubata na mbupụ ahia Co., Ltd.